Iziphumo eziPhambili kuGoogle ngeSemalt
I-Intanethi igcwele ulwazi. Uninzi lwethu lusongamele iileta, iindaba, imiyalezo ekufuneka siyijonge ebomini bethu bemihla ngemihla. Amawakawaka eiwebhusayithi ahlala kunye kwindawo yedijithali, kwaye uninzi lwazo ngokuqinisekileyo luyimbangi. Ke singayenza njani impumelelo kwishishini kwezi meko? Ewe kunjalo, ukunyuswa kwidijithali kunemithetho yayo kunye nalabo, abaqondayo ukuba bawuphumelele lo mdyarho.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuqhuba ishishini elikwi-Intanethi kuhluke ngokupheleleyo kuyo yonke into oyenzayo ebomini bokwenyani ukuze ufumane umvuzo kwaye ufezekise ukukhula kweshishini lakho. Abo bafunda imigaqo banokufumana impumelelo. Ke ukusebenzisa i-web optimization kunceda ukubonisa iimpahla okanye iinkonzo zakho. Ishishini lakho liyabonakala kubathengi abanokubakho.
Kungabaluleka ngakumbi kubanini bamashishini, iingcali zobudlelwane boluntu, kunye nabaphathi bezentengiso ukuba bafunde ngeendlela ezintsha zokusebenzisa izixhobo zewebhu ngokufanelekileyo. Yonke into oyenzileyo ukuze ufumane imali ingaphuculwa.
Ukufumana uncedo lweengcali zeqela likaSemalt, ishishini lakho linokufika kwiziphumo zikaGoogle eziphambili kwaye lifikelele kwisibonelelo obukade ulunqwenela.
Ngaba lithuba ngalinye lokufumana iziphumo ezikhuthaza ishishini lakho kwi-Intanethi ngokwakho?
Apha okanye phaya, sifumana amabali amadoda nabafazi abanenhlanhla abaye bafumana imali yabo ngokulula kwiWebhu eBanzi yeHlabathi. Ewe kunjalo, kuyakhuthaza ngokwenene. Kodwa loo mabali ahlala aba ziziphumo zentlahla enyulu, ubuchule bokuyila okanye ukuhlangana. Kodwa ngaba uqinisekile malunga nemibono yakho entsha yokwazisa ukuba uchithe imali enkulu kuyo? Ngaba ungaba namandla awaneleyo okuzifundisisa, uchithe ixesha elininzi ngelixa izimbangi zakho mhlawumbi ziya kusebenza nochwephesha ukufikelela iinjongo zabo? Ukuba awuyazi ngokuthe ngqo into ekufuneka uyenzile, kuyakuthatha ixesha elininzi ukuqonda ukuba isebenza njani. Kwimeko apho ungafumani yonke into ilungile, imali yokuphakanyiswa inokuchithwa nje.
Ngaba ungayonyusa i-e-commerce traffic yakho ngaphandle koncedo olongezelelweyo, kwaye iya kuthatha ixesha elingakanani? Ngaphandle kwamathandabuzo, kubaluleke kakhulu ukuba nolwazi malunga nokuphakanyiswa kwe-Intanethi. Unokufunda ulwazi oluninzi, uye kwi-webinars, uthathe inxaxheba kwiqela okanye kwizifundo ezizodwa. Inyathelo ngenyathelo, uya kufumana ulwazi olutsha kwimithombo eyahlukeneyo, kodwa emva kwayo yonke loo nto, ungaphoxeka sisiphumo. Ngokulula iinzame zakho zinokungakwaneli ukulungiselela yonke into ngokuchanekileyo. Kule meko, ishishini lakho liya kulahlekelwa ngamathuba okukhula kweeveki kunye neenyanga. Wonke umntu makacinge kabini malunga nokubaluleka kubo kule meko. Ngaba kufuneka bamkele loqoqosho lwe-phantom, okanye kufuneka batyale imali kwingeniso yabo yexesha elizayo ngobulumko ukuze bafumane iziphumo ngokukhawuleza nangokufanelekileyo?
Izixhobo zokunxibelelana kwi-Intanethi zeshishini lakho
Kule mihla, iivenkile ezikwi-Intanethi sele zithandwa kakhulu. Abantu banokuhlala ekhaya kwaye bachithe ixesha labo ngobunono ngexesha lokuthenga okubonakalayo, ukufumana izinto ezibonakalayo kubomi bokwenyani. Ungathenga iimpahla kunye neenkonzo kulo naliphi na iplanethi yethu, kwaye zinokwenzeka ngokukhawuleza njengoko bekunokwenzeka kwiminyaka edlulileyo. Kwezi meko, kubaluleke kakhulu ukwenza inkonzo yakho igqibelele, ikhuselekile, unike ingqalelo umntu ngamnye, kwaye ubancede bakhokelele kulonyulo olungcono. Kwaye ungalibali inkonzo yasemva kokuthengisa.
Ubuya kusabela njani ukuba abantu abaninzi batyelele indawo yakho kwaye bafuna iimpendulo kwimibuzo yabo? Kuya kufuneka ubenze bonwabe kwivenkile yakho eku-intanethi. Kuyimfuneko kakhulu ukuba nabathengi abaqhelekileyo okanye kunye nabalandeli be-brand. Kungenxa yoko abanikazi bamashishini kufuneka basebenzise izixhobo ze-Semalt SEO ngenkxaso yeengcali ezinobuchule. Njengawe neqela lakho aninakuba nexesha elaneleyo lokunika uncedo nenkxaso kumntu ngamnye ukuba zininzi kakhulu. Abantu abathandi ukulinda, ke oosomashishini kufuneka bayibone kwangaphambili le meko kwaye basebenze kuyo neengcali ngaphambili.
Ukudala isicwangciso esiliqhinga sokuthengisa kulo naluphi na uhlobo lweshishini, kuya kufuneka ubandakanye uhlahlo-lwabiwo mali lwezixhobo ezinamandla nezisebenzayo ze-SEO. Iya kwenza isiphumo sexesha elide kunye neengcebiso ezithile ezivela kubacebisi bethu.
Iindidi zohlahlo-lwabiwo mali ziyafumaneka ukuze wonke umntu akwazi ukukhetha eyona ifanelekileyo. Unokutsala abathengi abafuna imveliso yakho ngoncedo lwabo usebenzisa amanye amaqhinga okuthengisa, kunjalo.
Ngaba ucinga ukuba kulula ukuthengisa? Kuhle ukuthenga iimpahla kwivenkile ekwi-Intanethi eyadalwa ngobulumko. Kungalula ukuthengisa ukuba wenza isicwangciso esiya kukuphakamisa. Fumana izibonelelo, cela iingcebiso, kunye noncedo kubantu abazenze ngempumelelo amaxesha amaninzi. Uya kukhulisa ukuthengisa kwakho kwaye ufumane ishishini elizinzileyo kunye nabathengi, abaya kucebisa iinkonzo zakho. Hlala uxhumekile, bonisa izibonelelo zakho, kwaye wenze abathengi abanomdla babe nomdla.
Inkonzo yeWebhu yeSemalt
Ngoncedo lwezixhobo ze-intanethi, ingeniso yayiza kunyuka. Kuyakwenzeka kuba iwebhusayithi yakho iya kuba nakho ukubandakanya abantu abaninzi abatsha, kodwa iya kuba ngabathengi abavela kwindawo enye. Ngeqhinga elaphuhliswe yingcali yeArhente yethu yedijithali, unokufikelela kwezinye iingingqi, ilizwe, kunye neendawo ezahlukeneyo zehlabathi. Ke uSemalt akagcini ngokubonelela ngezixhobo ze-SEO kuphela, kodwa ukhulisa nesicwangciso sokuncedisa ishishini lakho emsebenzini kwihlabathi liphela kwaye ube nodumileyo. Singabuphucula ubuchule benjini yokukhangela. I-arhente yethu inikezela ngoncedo lweengcali ekukhetheni amagama aphambili ngokuthe ngqo kwimisebenzi yeshishini lakho.
I-Semalt iya kukuvumela ukuba ufumane ulwazi olufanelekileyo malunga neembangi, idatha engaguqukiyo malunga necala lakho lentengiso okanye imboni. Kuya kuba nako ukujonga iimayile kwiimidiya zentlalo, ukuphucula iinzame zakho kunye nobukho bakho.
I-SEO iya kubaluleka ngokwenene kule nkulungwane. Ukutyala imali efanelekileyo kunye nokubambisana kwemihla ngemihla, umnini-shishini uya kufumana inkampani ekhula rhoqo. Uhlobo lwakho luza kufumana i-organic traffic ngenjini yokukhangela. Iimpazamo zeshishini langaphambili beziya kupheliswa ngokukodwa. Ewe kunjalo, akukho mntu ugqibelele, ukusilela okuncinci kunokwenzeka, kodwa isicwangciso esiliqili sokuthengisa siya kukhokelela inkampani kwimpumelelo.
Ukuphuhliswa kwezorhwebo yedijithali kunye ne-Intanethi yayisesona sizathu sokubonakala kukaSemalt. KwakungoSeptemba ngo-2013 xa abantu abambalwa abanobuchule, abanetalente bagqiba ekubeni babe liqela. Kwaye babengabasunguli beSemalt abadale ummangaliso. Kule mihla inkampani ifundile, abasebenzi abanezakhono kunye nabathengi abonelisekileyo kwihlabathi liphela, banceda abantu benze amaphupha abo azaliseke.
Yintoni onayo yokuchonga ishishini lakho kule mihla? Awudingi kutyelela i-jypsy okanye ulinde emgceni. Into ekufuneka uyenzile kukunxibelelana neengcali zeDijithali zeengcali kwaye uthathe amanyathelo athile okukhulisa ishishini lakho. Iya kuba luncedo nokuba ungaphi na kwaye ungowabuphi na ubuzwe. Ukuba ufuna ukulayishwa kakhulu ngeefowuni kunye nee-imeyile ezivela kubathengi, khulisa intengiso yakho, kwaye ufumane inzuzo emsebenzini wakho, qhubeka ufunda.
Ngaba woyika ukuba unokungaqondi izixhobo ze-Semalt SEO? Abathengi bethu bavela kumazwe awahlukeneyo, ke abasebenzi bethu baya kuthetha kuwe ulwimi olukhethileyo. Yiza apha ukujonga uluhlu lweelwimi. Abathengi bethu basithumela amazwi ombulelo ngokubanceda baphuhle kwaye baphumelele:
INKONZO YENDALO (iZiko leeNkonzo ze-Apple). Isebenzisa i-Semalt FullSEO, le nkampani (esekwe e-Ukraine) yonyusa i-organic traffic ngama-300% ngaphantsi konyaka!
I-Zaodrasle.si. Iinyanga ezilishumi zokusebenza noSemalt zavumela levenkile i-intanethi yaseSlovenia yokwandisa ukugcwala kwi-webhusayithi yabo nge-520%. Rhoqo ngenyanga inani lotyelelo lonyuke nge-1216. Ngenxa yoko, iZaodrasle.si ngoku ibe yinkampani ekhokelayo yaseSlovenia kwicandelo layo lentengiso.
Portal yokukhangela kunye nokuthenga iifrigises. Iphakheji ye-FullSEO yenze ukuba eli shishini likwazi ukwandisa inani le-Google TOP-10 yamagama aphambili ukuya kuma-5782, ngaloo ndlela ikhula i-organic traffic ngama-303% kwiinyanga ezili-9. Namhlanje, le nkampani lelinye lawona magama abalulekileyo kwishishini le-franchise yase-UK.
Ngaba uyisebenzisa i-Intanethi? Emva koko kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni injini yokukhangela. Usebenzise enye okanye uninzi lwazo. Phakathi kwezinto ezahlukeneyo, iGoogle eyona nto iphambili. Ingaba isebenza kanjani? Uchwetheza igama lokukhangela okanye amagama, nqakraza 'ukukhangela,' kwaye i-injini yokukhangela ikubuyisela uluhlu lweesayithi ezifunyenweyo. Kutheni le nto abanye bephezulu kwimigca yeziphumo, ngelixa abanye besezantsi kuluhlu? Izibalo ziyasixelela, uninzi lwabasebenzisi lukhangela izikhundla eziphezulu. Ukuze ube lapho, kufuneka ungene kwi-TOP-10. Ukuboniswa phezulu kwiziphumo zophando, kufuneka uthathe amanyathelo, oya kuphucula isikhundla sakho kuluhlu lwemibuzo.
Izixhobo zethu ze-SEO
Iinjineli zeSemalt ziingcali zokwenza indawo yakho ibonakale kwindawo yokuqala kwiGoogle TOP 10. Xa ulapho, ukuthengisa kwakho kunye nokuthengisa kwi-intanethi kuya kusiza. Izibalo azixoki - umkhosi wabasebenzisi be-Intanethi ukhula imihla ngemihla. Okwangoku, ngaphezulu kwesithathu sabemi behlabathi bakwi-Intanethi. Kuya kufuneka utsale abaphulaphuli, kuba uneshishini, kwaye linemali yokuchitha. Amawakawaka kunye namawakawaka abasebenzisi babheka iimpahla ezifana nezakho kwiwebhusayithi yeqela lakho. Abantu abakhuphisana nawe ngokukhawuleza banethemba lokuthatha ezona zikhundla zibalaseleyo kwiziphumo zophando. Kutheni unga? Ufanelwe ukuba ubekhona-ke zinike ubomi kwiwebhusayithi yakho ngokusebenza kweinjini yokukhangela.
Abantu bayazithanda iividiyo! Sinokubonisa into oyenzayo kwividiyo yokuhlaziya epholileyo. Kuya kukuzisela abathengi abatsha kunye nokukhulisa ukuguqulwa kwakho!
Uhlalutyo lwendawo yezorhwebo
Kwihlabathi lethu elikhawulezayo, enye yezona zinto zibaluleke kakhulu lwazi. Ukuba uyayifumana ngexesha, unokulungisa amanyathelo akho ngakumbi kwaye uphephe iimpazamo ezibuhlungu. Enye yeendlela zokulawula ukukhula kweshishini lakho kukujonga idatha yethu yohlalutyo kunye noqikelelo lwenkqubela phambili kwikamva. Fumana ulwazi lwe-intanethi kunye neengcali zethu.
Khawufane ucinge, malunga namawaka amathathu ezigidi zabantu banokuba ngabathengi bakho kwixesha elizayo. Ke kutheni bengayi ezivenkileni kwangoku? Yimfesane, kodwa abathengi bakho abanokubakho baphazanyiswe zizigidi zabathengisi abakhuphisana nawe ekubambeni abathengi kunye nemali yabo. Ezo zikhwele azikuvumeli ukuba ungene kuPhezulu lukaGoogle. Ukuze uphumelele kulo mdyarho wanaphakade, kuya kufuneka ukhethe elona qela lobungcali liza kusebenza nalo.
Ngokudibana noSemalt, unokufumana iindlela ezintsha zokuphucula intengiso yakho. Singahlela inkonzo egqibeleleyo yokwamkela yonke into enokubandakanya: uphuhliso lwevenkile ye-Intanethi, ukuhlengahlengisa kwakhona kunye nokukhuthaza kunye nenkxaso yobugcisa egqibeleleyo. Nxibelelana nabacebisi bethu kwaye uzuze ezona ziphumo zibonisa kunye neengcali zeSemalt!
Kutheni abantu besikhetha?
Ngexesha lokusebenzisana ne-Arhente yethu yedijithali, iingcali zethu ziya kunika inkxaso iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Bayakuqonda iinkcukacha ezincinci zeshishini lakho kwi-Intanethi.
Sele sisebenze ngempumelelo ngaphezulu kwe-800 000cases kwaye siyigqibile. Sisebenzisane nabathengi abangaphezu kwama-300 000. Ungajonga zonke iiprojekthi kwiwebhusayithi yethu.
Ixabiso elifanelekileyo lesiphumo esihle
Abathengi bethu bayawuxabisa umgangatho womsebenzi wethu ngokunxulumene namaxabiso aguqukayo kunye nokunikezelwa kwamaxabiso anomdla.
Ukusebenza ngokugcwele kweinjini yokukhangela
Okokuqala, iprojekthi yakho iya kuba nomphathi wakho oza kuba noxanduva kuzo zonke iinkqubo esinikezela ngazo. Siza kuqokelela ulwazi olupheleleyo malunga nabantu abakhuphisana nawe kwangaphambili. Ubume besiza buza kuhlaziywa. Ukwenzela ukutsala abaphulaphuli ekujoliswe kubo, iqela lethu le-SEO liya kuthatha awona magama afanelekileyo kunye namaphepha okuphucula amabinzana afanelekileyo. Indawo yakho yewebhu iya kutshekishwa njengezihlungi zikaGoogle. Ingcali yethu iya kukhulisa ngobuchule isicwangciso sokuqhubela phambili isenzo
Zimbalwa iingcebiso zokwandisa ulwazi kwi-intanethi
Sicebisa ngamandla ukusebenzisa ezi ngcebiso. Iya kwenza ishishini lakho ukuba likhuphisane ngakumbi. Iwebhusayithi yakho iya kuthintela izithintelo, kwaye ukukhuthaza kwakho ngokuqinisekileyo kuya kusebenza ngakumbi.
Ukujonga kunye nokuhlela ikhowudi ye-HTML ukuyenza ifezeke;
Ukwenza iithegi kunye neempawu ngokwendlela emitsha yenjini yokukhangela;
Ukwenza iithegi zemeta usebenzisa amagama aphambili.
Ukubonelela ngokusebenza, sivale amakhonkco aqhekekileyo. Kwakhona, sakha amakhonkco amaninzi kangangoko anakho kwimithombo enyusiweyo. Kubaluleke kakhulu ukuhlela ii-robots.txt kunye neefayile ze-.htaccess. Eli nyathelo liza kubonelela ngempembelelo elungileyo ekubonakaleni kwewebhusayithi yakho kuluhlu lweinjini yokukhangela.
Mhlawumbi kukho amagama amaninzi kakhulu amatsha kunye namagama angaziwayo? Asifuni ukuba udideke kakhulu. Kodwa akukho lula ukuba ithandwe kwiWebhu eBanzi yeHlabathi. Ifuna ulwazi olukhethekileyo kunye namava ayimpumelelo yeeprojekthi zangaphambili. Sikunye neqela lethu leengcali ezilumkileyo nezinobungane, uya kufumana iphulo elinamandla le-SEO. Indawo yakho yewebhu iya kubonakala kubathengi kunye nabantu abanomdla kwiinkonzo zakho okanye iimpahla ngoncedo lwethu.
Nokuba ungahlala phi okanye uthetha luphi ulwimi. Unokuba naluphi na uhlobo lweshishini, kwaye siya kukufumana isisombululo. Indawo yokubhaka yendawo okanye ukuhambisa imoto, naliphi na ishishini elinokuba likratshi. Zama ukuphucula ishishini lakho ngeArhente yethu yedijithali kwaye ufezekise iziphumo ezilungileyo!